शीर्ष3लन्डनबाट सर्वश्रेष्ठ ट्रेन यात्रा गन्तव्यहरू | एक ट्रेन बचत गर्नुहोस्
घर > यात्रा युरोप > शीर्ष3लन्डनबाट सर्वश्रेष्ठ ट्रेन यात्रा गन्तव्यहरू
(पछिल्लो पटक अपडेट गरिएको: 22/11/2021)
बेलायत. राजधानीले यात्रुहरू र स्थानीयहरूका लागि प्रशस्त आनन्दहरू प्रदान गर्दछ. बिग बेन र लन्डन आई देखि वेस्टमिन्स्टर अबे र बकिंघम सम्म दरबार – लन्डनमा भ्रमण गर्न धेरै ठाउँहरू छन्. त्यसपछि त्यहाँ जीवन्त वास्तुकला पनि छ, स्पष्ट रातको जीवन, र स्वादिष्ट भोजन. यद्यपि, धेरैजसो मानिसहरूले बिर्सने कुरा के हो भने लन्डन धेरै यात्राहरूबाट टाढाको ढुङ्गा हो रेल यात्रा U.K मा गन्तव्यहरू. र युरोप.
चाहे तपाईं सुस्त लन्डनको मौसमबाट बच्न चाहनुहुन्छ र केही घाम ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ वा इतिहासको साथ भेटघाटमा आफूलाई डुबाउन चाहनुहुन्छ।, तपाईंले लन्डन वरपर धेरै गन्तव्यहरू फेला पार्नुहुनेछ. सबैभन्दा राम्रो पक्ष यो हो कि तपाईले एयरपोर्टमा लामो सुरक्षा जाँच लाइनहरू लड्नु पर्दैन. सट्टा, तपाईं सजिलै आफ्नो गन्तव्य छनोट गर्न सक्नुहुन्छ र लन्डनका धेरै स्टेशनहरू मध्ये एउटाबाट रेलमा चढ्न सक्नुहुन्छ. यहाँ छन्3लन्डनबाट उत्तम रेल यात्रा गन्तव्यहरू.
ट्रेन सवारीको जादुई आकर्षण
चाहे तपाईं केहि दिनको लागि लन्डन भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ वा तपाईले सम्झन सक्ने लामो समयसम्म शहरमा बस्नुभएको छ,aलिँदै रेल सवारी शहर बारे आफ्नो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ. सहरी महानगरको अवतार बाहिर, लन्डन एक मेजबान द्वारा घेरिएको छ सुरम्य गाउँहरु, कलेज शहरहरू, समुद्र तट, र ऐतिहासिक सहर.
यी सबै गन्तव्यहरू लन्डनबाट रेलद्वारा सजिलै पहुँचयोग्य छन्, र तपाईलाई पुग्न केहि घण्टा भन्दा बढी लाग्दैन. लन्डनबाट रेलको सवारी सबैभन्दा उत्कृष्ट अंग्रेजी अनुभवहरू मध्ये एक हो जुन तपाईंले कहिल्यै देख्नुहुनेछ।.
तर लन्डनबाट यी रेल यात्राहरूको बारेमा सबैभन्दा राम्रो भाग गन्तव्य होइन. घन्टा लामो यात्राले तपाईंलाई देहाती महलहरूले भरिएको क्लासिक युरोपेली ग्रामीण इलाकाको झलक दिन्छ।, ताजा पानीका मुहानहरू, र घुम्ने पहाडहरू.
त्यसैले, थप अडान बिना, लन्डनबाट उत्कृष्ट रेल यात्रा गन्तव्यहरूको लागि हाम्रा छनौटहरूमा एक नजर राखौं.
1. लन्डनबाट सर्वश्रेष्ठ ट्रेन यात्रा गन्तव्यहरू: ब्राइटन
यदि तपाइँ लन्डनबाट रेल यात्रा गर्ने बारे सोच्दै हुनुहुन्छ भने, ब्राइटन सम्भवतः तपाइँको दिमागमा आउने पहिलो स्थान हो. पुरानो पेबल समुद्र तटको विशेषता, हिप क्याफेहरू, आलीशान रेस्टुरेन्टहरू, र साँघुरो घुमाउरो सडकहरू, ब्राइटनले अराजक शहरी जीवनबाट स्वागत ब्रेक प्रदान गर्दछ.
यसबाहेक, रमणीय समुद्री किनारको सहर आश्चर्यजनक रोयल प्याभिलियनको घर हो, २०० वर्ष पुरानो दरबार जुन कुनै समय प्रिन्स अफ वेल्सको ग्रीष्मकालीन रिट्रीट थियो. "युकेको समलैंगिक राजधानी" को रूपमा प्रसिद्ध, ब्राइटन क्वियर-मैत्री बारहरूको प्रभावशाली एरे र एक उल्लेखनीय वार्षिक समलिङ्गी गर्व उत्सवको घर पनि हो।.
न्यानो सूर्यको किरणहरू भिजाएर, रमणीय ब्राइटन सडकहरूमा पैदल यात्राले तपाईंलाई शहरको नयाँ पक्ष पत्ता लगाउन दिनेछ. साँघुरो गल्लीहरूमा पुरानो स्मारिका पसलहरू छन्, विनाइल रेकर्ड स्टोर, र मनमोहक कला ग्यालरीहरू.
यी सडकहरू बिचमा रहेको मिठो क्याफेहरू मध्ये एकमा एक कप कफीको लागि रोक्न नबिर्सनुहोस्. वा तपाइँ बियर बगैंचा मध्ये एक मा एक स्फूर्तिदायी पिन्ट को मजा लिन सक्नुहुन्छ. साथै, १६ औं शताब्दीको वास्तुकलाका केही उत्कृष्ट जीवित नमूनाहरूको लागि आँखा राख्नुहोस्.
ब्राइटनका अन्य आकर्षणहरूमा प्रेस्टन पार्क रकरी समावेश छ, जुन U.K मा सबैभन्दा ठूलो रक गार्डन हो, साथै स्प्राइटली ब्राइटन प्यालेस पियर. यो धेरै को लागी एक उपचार हो एकल यात्री जस्तै यो परिवार को लागी हो.
चाहे तपाईं छिटो दिनको यात्रा वा आरामको खोजीमा हुनुहुन्छ सप्तान्तमा जानु लन्डनबाट, ब्राइटन एक उत्कृष्ट विकल्प हो. बारे थप पढ्न नबिर्सनुहोस् ब्राइटन मा गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो चीजहरु, बेलायत।, एक सप्ताहन्तको लागि आफ्नो यात्रा कार्यक्रम योजना गर्दा.
ट्रेन द्वारा ब्राइटन पुग्दै
ब्राइटनको बारेमा राम्रो कुरा यो हो कि तपाईं लगभग एक घण्टामा लन्डनबाट शहर पुग्न सक्नुहुन्छ. ब्राइटनका लागि ट्रेनहरू प्रत्येक प्रस्थान गर्दछ 10 विभिन्न स्टेशनहरूबाट मिनेटहरू, लन्डन भिक्टोरिया स्टेशन र लन्डन सेन्ट सहित. Pancras स्टेशन.
2. लन्डनबाट सर्वश्रेष्ठ ट्रेन यात्रा गन्तव्यहरू: स्टोनहेंज र सालिसबरी
यसको साथ मध्ययुगीन महल र शाही महलहरू, यूकेमा इतिहासप्रेमीहरूको लागि आकर्षणको कुनै कमी छैन. तर यदि तपाईं इतिहासको पुस्तकको पानाहरू हेर्ने पहिलो हातको अनुभव चाहानुहुन्छ भने जीवनमा आउनुहोस्, Stonehenge को भ्रमण एक आवश्यक छ.
विशाल प्रागैतिहासिक ढुङ्गा संरचना, भन्दा बढी रहेको विश्वास गरिएको छ 5,000 वर्ष पूरानो, इतिहासकारहरू र पुरातत्वविद्हरूलाई समान रूपमा भ्रमित गर्न जारी छ. आगन्तुकहरूले मद्दत गर्न सक्दैनन् तर आश्चर्यचकित छन् कि कसरी निर्माणकर्ताहरूले ढुङ्गाका ती ठूला ब्लकहरूलाई तिनीहरूको हालको स्थानहरूमा तान्न सफल भए।.
भन्दा कम स्थित छ 10 सालिसबरीबाट माईल टाढा, स्टोनहेन्ज U.K बाट 90 मिनेटको रेल यात्रा टाढा छ. राजधानी. तपाईंले सालिसबरी स्टेशनमा धेरै बसहरू र ट्याक्सीहरू पाउनुहुनेछ जुन तपाईंलाई प्रागैतिहासिक साइटमा लैजान्छ।.
जब तपाईं त्यहाँ हुनुहुन्छ, यस क्षेत्रले प्रस्ताव गरेको अन्य आकर्षणहरू अन्वेषण गर्न नबिर्सनुहोस्. यसमा वुडहेन्जको तारकीय काठको घेरा र रहस्यमय डरिङ्टन पर्खालका अवशेषहरू समावेश छन्।.
साथै, ऐतिहासिक शहर सालिसबरीमा केही समय बिताउनु राम्रो विचार हो. 13 औं शताब्दीको सालिसबरी क्याथेड्रलमा जानुहोस् र एलिजाबेथन र भिक्टोरियनको झलकको लागि क्याथेड्रल क्लोजमा घुम्नुहोस्। वास्तु विचित्रताहरू. विचित्र क्याफेमा बियरको पिन्टको लागि बसोबास गर्नु अघि मार्केट स्क्वायरमा किनमेल एक्स्ट्राभ्यागान्जामा नलिनुहोस्।.
रेल द्वारा Stonehenge पुग्न
लन्डन वाटरलू स्टेशनबाट सालिसबरीको लागि ट्रेन लिनुहोस्. एकचोटि तपाईं सालिसबरी स्टेशनमा पुग्नुहुन्छ, स्टोनहेंज पुग्न निजी ट्याक्सी वा बसमा जानुहोस्. निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले आफ्नो स्टोनहेन्ज भ्रमण अग्रिम बुक गर्नुहोस्.
3. लन्डनबाट सर्वश्रेष्ठ ट्रेन यात्रा गन्तव्यहरू: Cotswolds
तपाईलाई थाहा छ कुनै ठाउँ घुम्न लायक छ जब यसलाई "उत्कृष्ट प्राकृतिक सौन्दर्यको क्षेत्र" को रूपमा तोकिएको छ।. यसको हरियाली पहाडहरु संग, मैनीक्योर फूल बगैंचा, मह ढुङ्गा कुटीरहरू, र रमणीय हवेलीहरू, Cotswolds क्लासिक अंग्रेजी ग्रामीण इलाकाको थुक्ने छवि हो जुन तपाईंले चलचित्रहरूमा देख्नुभएको हुन सक्छ.
Cotswolds ती ठाउँहरू मध्ये एक हो जहाँ तपाईंले लन्डनबाट आरामदायी पलायनको लागि धेरै गर्न आवश्यक पर्दैन।. यस क्षेत्रका लोकप्रिय आकर्षणहरूमा ब्रोडवे टावर समावेश छ, बर्टन-अन-द-वाटर, बीबरी, र सुडेली महल.
ट्रेन द्वारा Cotswolds पुग्न
Cotswolds क्षेत्र रेल स्टेशन को एक cornucopia द्वारा घेरिएको छ, बानबरी सहित, स्नान, चेल्तेनहम, र मोर्टेन-इन-मार्श. लन्डनबाट Cotswolds पुग्नको लागि सबैभन्दा राम्रो तरिका लन्डन प्याडिंगटन स्टेशनबाट मोर्टेन-इन-मार्श सम्मको रेल लिनु हो।. ९० मिनेटको रेल सवारीले तपाईंलाई पुरस्कृत गर्छ लुभावनी दृश्य अंग्रेजी ग्रामीण इलाकाको.
अर्को पटक तपाईंले आफूलाई आरामदायी छुट्टीको चाहना पाउनुहुन्छ, धेरै समय योजना बर्बाद नगर्नुहोस्. सट्टा, कुनै पनि लन्डन स्टेशनबाट रेलमा चढ्नुहोस् र यूकेमा यी तस्विर-सही गन्तव्यहरू मध्ये एउटामा जानुहोस्।.
हामी मा एक ट्रेन बचत गर्नुहोस् तपाईंलाई यी शीर्षमा यात्राको योजना बनाउन मद्दत गर्न पाउँदा खुसी हुनेछु3लन्डनबाट उत्कृष्ट यात्रा गन्तव्यहरू.
के तपाइँ हाम्रो ब्लग पोष्ट इम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ "शीर्ष3लन्डनबाट उत्तम रेल यात्रा गन्तव्यहरू" तपाईंको साइटमा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fne%2Fbest-train-trip-destinations-london%2F - (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
BestTripDestinations	लन्डन	रेल यात्रा	रेल यात्रा	TrainTripLondon
सर्वश्रेष्ठ स्टीकहाउसहरू. सर्वश्रेष्ठ स्टीकहाउसहरू - तपाईं यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ रेबेकालाई सम्पर्क गर्नुहोस्